ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်သူတွေရဲ့ အမူအကျင့် ၁၀ မျိုး – Gentleman Magazine
ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်သူတွေရဲ့ အမူအကျင့် ၁၀ မျိုး
အလုပ်အကိုင်တစ်ခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်ဆောက်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး မိတ်ဆွေရှာရင်တောင် သင် လူကောင်းတွေကို ပိုပြီးလိုချင်မှာပါ။ ငတုံးတွေနဲ့ ဘယ်သူမှ မတွဲချင်ပါဘူး။ ပြောင်းပြန် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် သင်လဲ ငတုံးတစ်ကောင် ဖြစ်မနေဖို့ လိုပါတယ်။
လူကောင်းဆိုတာ တကယ် ကြင်နာသနားတတ်ပြီး ရိုးသားတာ၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တာနဲ့အတူ ထက်မြက်မှုတို့ ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ လူကောင်းတွေမှာ အတွင်းစိတ်နဲ့ ပြင်ပပုံစံ ထပ်တူကျနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒိလို လူတစ်ယောက်ဟာ ရှားပါးပြီး တန်ဖိုးထားရမယ့်သူပါ။ ငတုံးတွေ၊ အလိမ်အညာတွေ၊ ငကြွားတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ လောကကြီးမှာ လူကောင်းဆိုတာ ရှားသထက် ရှားလာပါပြီ။ အဲဒိ ရှားပါးမျိုးစိတ်တွေကို ကံကောင်းလို့ တွေ့ခဲ့ရင် သိရှိနိုင်ဖို့ လူကောင်းတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. သူတို့ဟာ အာရုံစိုက်ခံရအောင် မလုပ်ကြပါဘူး
သူတို့ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုဟာ လုံလောက်နေပါပြီ။ အာရုံစိုက်ခံချင်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ့်ဘာသာယုံကြည်မှုကို အာရုံစိုက်ခံရမှုနဲ့ အမြဲ ပြန်ဖြည့်နေရလို့ပါ။ လူကောင်းတွေကတော့ ပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်မခတ်ပါဘူး။
၂. လူကြိုက်များအောင် မလုပ်ကြပါဘူး
လူကြိုက်များချင်တာဟာ မလုံခြုံမှုနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ အထင်ကြီးခံလိုမှုကနေ ပေါက်ဖွားလာတာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိသူတွေကတော့ သူတို့ အဆင်ပြေနေရင် တော်ပါပြီ။ သင် သူတိုိ့ကို ကြိုက်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ မကြိုက်ဖူးဆိုရင်လဲ သူတို့က အဆင်ပြေနေဦးမှာပါ။
၃. တခြားသူတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်
သာမန်လူတွေဟာ လူကောင်းတွေထက် အလိမ်အညာ ပိုပြီးခံရနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အစစ်အမှန် ရိုးသားမှုကို အရှိအတိုင်း မြင်တတ်လို့ တော်ရုံနဲ့ အလိမ်မခံရပါဘူး။
၄. သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကျေနပ်နေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေ အလိုမပြည့်မှုတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရတုန်းမှာ လူကောင်းတွေကတော့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ကျေနပ်နေပြီးသားပါ။
၅. စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောပြီး ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါတယ်
သူတို့မှာ ချဲ့ကားကြွားဝါမှု မရှိပါဘူး။ သင် မကြိုက်ရင်တောင် သူတို့ပြောချင်တာကို ပြောတတ်ကြပြီးပြောတဲ့အတိုင်းလဲ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
၆. ကိစ္စ မရှုပ်ကြပါဘူး
သူတို့ဘဝ သူတို့ ကျေနပ်နေတဲ့အခါမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ပြင်ပကိစ္စတွေ လုပ်ဖို့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ သူတို့ ပျော်ရွှင်မှုက သူတို့ အတွင်းစိတ်၊ သူတို့ မိသားစုနဲ့ သူတို့အလုပ်မှာပဲ ရှိနေလို့ပါ။
၇. ထိလွယ်ရှလွယ် မဖြစ်ပါဘူး
သူတို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ အရမ်းတော်တယ်လို့ ခံယူမထားတဲ့အခါ ထိလွယ်ရှလွယ် အရမ်း မဖြစ်တော့ပါဘူး။ မရည်ရွယ်ပဲ ပြောတဲ့ စကားလေးတွေကို လိုက်မခံစားတော့ပါဘူး။
သူတို့ခွန်အားကို သူတို့ သိနေတော့ ငါ ဘာလုပ်နိုင်တာဆိုပြီး ပြောပြီး စိတ်ခွန်အားယူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကြွားလဲ မကြွားဝါကြပါဘူး။ စိတ်ခွန်အားယူတာ ကောင်းပေမယ့် အရှိအတိုင်း လက်ခံနိုင်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
၉. သူတို့ဟာ တည်ငြိမ်ပါတယ်
သူတို့ကိုယ်သူတို့ သိကြပြီး စိတ်အပြောင်းအလဲ အရမ်း မမြန်ကြတော့ သူတို့ကို ခန့်မှန်းဖို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။ တည်ငြိမ်ပြီး အခုတမျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။
၁၀. သူတို့ လုပ်နိုင်တာကို လုပ်ကြပါတယ့
သူတို့ဟာ သူတို့ မလုပ်ချင်တာကို တခြားသူတွေကို လုပ်ဖို့ မြှောက်ပေးမယ့် အစား မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ တခြားသူတွေလိုမျိုး သာမန်လူပဲဆိုတာကို သိကြလို့ လုပ်နိုင်တာကို အကူအညီယူပြီး လုပ်ကြပါတယ်။ မနိုင်ဝန် မထမ်းသလို ရေသာလဲ မခိုပါဘူး။
ဖွောငျ့မတျ မှနျကနျသူတှရေဲ့ အမူအကငျြ့ ၁၀ မြိုး
အလုပျအကိုငျတဈခု၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခု တညျဆောကျနတောပဲ ဖွဈဖွဈ အနညျးဆုံး မိတျဆှရှောရငျတောငျ သငျ လူကောငျးတှကေို ပိုပွီးလိုခငျြမှာပါ။ ငတုံးတှနေဲ့ ဘယျသူမှ မတှဲခငျြပါဘူး။ ပွောငျးပွနျ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ရငျ သငျလဲ ငတုံးတဈကောငျ ဖွဈမနဖေို့ လိုပါတယျ။
လူကောငျးဆိုတာ တကယျ ကွငျနာသနားတတျပွီး ရိုးသားတာ၊ ကိုယျခငျြးစာတတျတာနဲ့အတူ ထကျမွကျမှုတို့ ပေါငျးစပျထားတာပါ။ လူကောငျးတှမှော အတှငျးစိတျနဲ့ ပွငျပပုံစံ ထပျတူကနြတေတျပါတယျ။ အဲဒိလို လူတဈယောကျဟာ ရှားပါးပွီး တနျဖိုးထားရမယျ့သူပါ။ ငတုံးတှေ၊ အလိမျအညာတှေ၊ ငကွှားတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့ လောကကွီးမှာ လူကောငျးဆိုတာ ရှားသထကျ ရှားလာပါပွီ။ အဲဒိ ရှားပါးမြိုးစိတျတှကေို ကံကောငျးလို့ တှခေဲ့ရငျ သိရှိနိုငျဖို့ လူကောငျးတှရေဲ့ အမူအကငျြ့တှကေို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. သူတို့ဟာ အာရုံစိုကျခံရအောငျ မလုပျကွပါဘူး
သူတို့ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှုဟာ လုံလောကျနပေါပွီ။ အာရုံစိုကျခံခငျြသူတှဟော သူတို့ရဲ့ ကိုယျ့ဘာသာယုံကွညျမှုကို အာရုံစိုကျခံရမှုနဲ့ အမွဲ ပွနျဖွညျ့နရေလို့ပါ။ လူကောငျးတှကေတော့ ပွညျ့တဲ့အိုး ဘောငျဘငျမခတျပါဘူး။
၂. လူကွိုကျမြားအောငျ မလုပျကွပါဘူး
လူကွိုကျမြားခငျြတာဟာ မလုံခွုံမှုနဲ့ ကိုယျ့ဘာသာ အထငျကွီးခံလိုမှုကနေ ပေါကျဖှားလာတာပါ။ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိသူတှကေတော့ သူတို့ အဆငျပွနေရေငျ တျောပါပွီ။ သငျ သူတို့ကို ကွိုကျလဲ အဆငျပွပေါတယျ။ မကွိုကျဖူးဆိုရငျလဲ သူတို့က အဆငျပွနေဦေးမှာပါ။
၃. တခွားသူတှအေကွောငျး ကောငျးကောငျးသိကွပါတယျ
သာမနျလူတှဟော လူကောငျးတှထေကျ အလိမျအညာ ပိုပွီးခံရနိုငျပါတယျ။ သူတို့ကတော့ အစဈအမှနျ ရိုးသားမှုကို အရှိအတိုငျး မွငျတတျလို့ တျောရုံနဲ့ အလိမျမခံရပါဘူး။
၄. သူတို့ကိုယျသူတို့ ကနြေပျနပေါတယျ
ကြှနျတျောတို့တှေ အလိုမပွညျ့မှုတှနေဲ့ ရုနျးကနျနရေတုနျးမှာ လူကောငျးတှကေတော့ သူတို့ကိုယျ သူတို့ ကနြေပျနပွေီးသားပါ။
၅. စိတျထဲရှိတဲ့အတိုငျး ပွောပွီး ပွောတဲ့အတိုငျး လုပျပါတယျ
သူတို့မှာ ခြဲ့ကားကွှားဝါမှု မရှိပါဘူး။ သငျ မကွိုကျရငျတောငျ သူတို့ပွောခငျြတာကို ပွောတတျကွပွီးပွောတဲ့အတိုငျးလဲ လုပျတတျကွပါတယျ။
၆. ကိစ်စ မရှုပျကွပါဘူး
သူတို့ဘဝ သူတို့ ကနြေပျနတေဲ့အခါမှာ ပြျောရှငျဖို့ ပွငျပကိစ်စတှေ လုပျဖို့ မလိုအပျတော့ပါဘူး။ သူတို့ ပြျောရှငျမှုက သူတို့ အတှငျးစိတျ၊ သူတို့ မိသားစုနဲ့ သူတို့အလုပျမှာပဲ ရှိနလေို့ပါ။
၇. ထိလှယျရှလှယျ မဖွဈပါဘူး
သူတို့က သူတို့ကိုယျသူတို့ အရမျးတျောတယျလို့ ခံယူမထားတဲ့အခါ ထိလှယျရှလှယျ အရမျး မဖွဈတော့ပါဘူး။ မရညျရှယျပဲ ပွောတဲ့ စကားလေးတှကေို လိုကျမခံစားတော့ပါဘူး။
သူတို့ခှနျအားကို သူတို့ သိနတေော့ ငါ ဘာလုပျနိုငျတာဆိုပွီး ပွောပွီး စိတျခှနျအားယူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကွှားလဲ မကွှားဝါကွပါဘူး။ စိတျခှနျအားယူတာ ကောငျးပမေယျ့ အရှိအတိုငျး လကျခံနိုငျတာက ပိုကောငျးပါတယျ။
၉. သူတို့ဟာ တညျငွိမျပါတယျ
သူတို့ကိုယျသူတို့ သိကွပွီး စိတျအပွောငျးအလဲ အရမျး မမွနျကွတော့ သူတို့ကို ခနျ့မှနျးဖို့ ပိုလှယျပါတယျ။ တညျငွိမျပွီး အခုတမြိုး တျောကွာတဈမြိုး မလုပျတတျကွပါဘူး။
၁၀. သူတို့ လုပျနိုငျတာကို လုပျကွပါတယ့
သူတို့ဟာ သူတို့ မလုပျခငျြတာကို တခွားသူတှကေို လုပျဖို့ မွှောကျပေးမယျ့ အစား မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ဟာ တခွားသူတှလေိုမြိုး သာမနျလူပဲဆိုတာကို သိကွလို့ လုပျနိုငျတာကို အကူအညီယူပွီး လုပျကွပါတယျ။ မနိုငျဝနျ မထမျးသလို ရသောလဲ မခိုပါဘူး။
Previous: လူတွေကို ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံတတ်ဖို့
Next: လူသားကျေးကျွန်တွေဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်လိုရှင်သန်ကြမလဲ